DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin)
/Blog/Gallery/DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin)
Posted on 05 / 30 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Kuyini I-Nandrolone Decanoate(DECA)
Namuhla, abaningi bezinsimbi zomzimba bakhetha ukukhwabanisa i-steroid ukuze bakhulise ubunzima babo bemisipha. I-Nandrolone Decanoate, eyaziwa ngokuthi i-DECA, ethengiswa ngaphansi kwegama le-DECA-Durabolin, ingenye ye-steroids enamandla enikeza imiphumela emnandi lapho kukhishwa isisu. Uma ususha embonini, ungase uzibuze ukuthi yini i-Deca Durabolin nokuthi ingakwenzela yona. Nazi ezinye zezinto ze-Nandrolone Decanoate (DECA) ezibeka eceleni kwabanye.
I-Nandrolone Decanoate (DECA) i-steroid esebenza kancane kancane, futhi lokhu kwenza kube yithandwa kakhulu. Iyini inzuzo yokusebenzisa i-steroid kancane? Uma isikhathi eside sokuphila, isikhathi eside siyoyithatha ukuba i-steroid iphume emzimbeni. Futhi lokhu kusho ukuthi umthamo we-Nandrolone Decanoate akudingeki ube njalo. Kumele uthole umjovo ngemuva kwamasonto amathathu, ngokungafani nabanye ongase udingeke uthole i-jab ngeviki.
I-Nandrolone Decanoate (DECA) (360-70-3) kubonakala nemiphumela emibi embalwa, okwenza kube mnandi kulabo abathanda ukunakekela impilo yabo. Imiphumela emibi kakhulu engezansi ngoba ingavamile ukuguqula ku-estrogen.
Imiphumela ye I-Nandrolone Decanoate ekwakheni umzimba
-Improve impilo ehlangene
-Nciphisa isisindo esisindayo semisipha
Uke waya esikoleni sokuzivocavoca futhi awukwazi ukwenza noma yini eyenziwa ngenxa yokukhathala kusukela umsebenzi wakho wokugcina uphume? Ngemuva kokusetshenziswa kweNandrolone Decanoate, uzoqaphela ukuthi ungabuyela ekusebenziseni okudlule futhi ukwazi ukwenza isikhathi esilandelayo kangcono.
Thuthukisa impilo ehlangene
Ubuhlungu obuningi obuhlangene nokusetshenziswa kwe-Nandrolone Decanoate ngoba kuqinisekisa ukuthi bahlala bephila kahle.
Ngaphandle kwamandla anele, imigomo yakho yokwakha umzimba ingase ibe yinto eyize. Ngakolunye uhlangothi, uma unamandla, ungaphakamisa izisindo ezinkulu ngakho uthola imisipha eminingi. I-Nandrolone Decanoate powder ukwandisa amandla akho, kukuvumela ukuba uthinte izisindo ezinamandla amakhulu.
Ukwandisa isisindo somzimba osondayo
I-Nandrolone Decanoate inekhono elihle lokukwakha imisipha, futhi into enhle ukuthi ihlanganisa kuphela isisindo esinamafutha mass.
Ingabe udinga ukwenza okusebenzayo kwakho kuvelele? Ukusetshenziswa kwe-Nandrolone Decanoate kuzosiza ekwenzeni iziteshi zakho zokuzivocavoca zikhiqize ngokwengeziwe, okwenza ufezelele umzimba owawufisa esikhathini esifushane.
Indlela Yokwenza Nandrolone Decanoate (DECA)
Isinyathelo 1: Phakamisa i-Nandrolone Decanoate powder ibe yi-beaker.
Isinyathelo 2: Engeza i-BA ne-BB.
Isinyathelo i-3: I-solvents iqala ukuhlakazeka ku-powder. Gcoba ingxube ngobumnene ukusheshisa inqubo.
Isinyathelo 4: Engeza amafutha kaSesame kulesisombululo bese uyishukumisa kahle.
Isinyathelo 5: Dweba isixazululo esishisayo ku-syringe esizosetshenziselwa ukuhlunga bese unamathisela inaliti kwisihlungi sesipringe.
Isinyathelo 6: Capha isitsha
Amakhemikhali okudingeka uwalungiselele
I-Nandrolone Decanoate Recipe ye-DECA 50ml ngayinye ku-200mg / ml
10grams I-Nandrolone Decanoate powder
I-32.50ml i-sesame yamafutha (Gwema amafutha ashubile nalabo ongase ube nokugula).
I-2.5 yobuthi obudakayo 5% (Ungadluli i-5% BA nganoma yikuphi ukuguqulwa okwenzayo)
Izimbiza zangaphambi kwenqubo
Izihlungi ze-22 micron
Imihlahlandlela yesinyathelo ngesinyathelo sendlela yokwenza iNandrolone Decanoate
Isinyathelo 1: Ukulinganisa i-Nandrolone Decanoate powder ibe yi-beaker.
Lokhu kwenziwa ngokuthatha ucezu lwephepha, ukulibeka esikalini bese ucindezelekisa ukuze isisindo sephepha singatholi uma ulinganisa i-powder yakho. Engeza kancane kancane i-powder yakho ukuze ungagcini ukugcina ngemuva kokudlula isisindo sakho esihle se-powder. Ukuze uqinisekise ukuthi unembile, thola isilinganiselo esinembile ngokwanele kuhlelo. Uma uthola amagremu ayishumi, manje usuhle ukuhamba.
Isinyathelo 3: I-solvents iqala ukuhlakazeka ku-powder. Gcoba ingxube ngobumnene ukusheshisa inqubo.
Ungakhetha ukufudumala isixazululo ngokusebenzisa amanzi okugeza ukuze wenze ngokushesha. Uyenza kanjani lokho? Thatha ibhodlela ngamanzi bese ulibeka esitofu ukuze lishise. Thola i-beaker equkethe isisombululo bese uyibeka ngamamitha ambalwa emanzini. Ungasebenzisa futhi amanzi afudumele kusuka ku-kettle. Gwema amanzi ashisayo kakhulu ngenxa yokuthi izoholela ekusikheni okwenza kanjalo kuphazamise inqubo.
Isinyathelo 4: Engeza amafutha eSesame esixazululweni bese uyishukumisa kahle.
Amafutha eSesame kufanele abe nokushisa okufanayo njengokwesisombululo sokuvumela isixazululo ukugeleza ngendlela efanele. Hlola noma yiliphi i-hormone swirls engase idale futhi iqinisekise ukuthi akekho ngaphambi kokuthuthela kwinqubo yokuhlunga.
Isinyathelo 5: Dweba ikhambi elifudumele ungene esiveni esizosetshenziselwa ukusihlunga bese unamathisela inaliti kusihlungi s syringe.
Sebenzisa ingcindezi ethile kwi-syringe ukuvumela isixazululo ukugeleza futhi sithathe isihlungi sisha uma uqaphela ukuthi inqubo iyahamba kancane.
Isinyathelo 6: Thepha isitsha
Uma usuqedile ngenqubo yokuhlunga, isixazululo sesikulungele ukusetshenziswa. Capha isitsha ukugwema ukungcola.
Uma kuziwa ekuthatheni i-steroids, kunezinhlobo ezimbili zabantu; labo abathengisa i-Nandrolone Decanoate ukudayiswa nalabo abakhetha ikhaya ukuliphuza kusukela ku-Nandrolone Decanoate eluhlaza. Lapho usebenzisa kokubili, kunomgomo owodwa kuphela; ukwakha umzimba obukeka kangcono.
Uma kwenzeka ukhetha ekhaya ukuphuza i-steroid ngokwakho, kufanele okungenani uzame ukwenza ngendlela efanele. Ngokulandela iresiphi ye-Nandrolone Decanoate enikeziwe indlela yokwenza i-Deca, cishe uzothola imiphumela ephelele. Ukudlulela noma ukusebenzisa imali encane ye-solvents noma i- I-Nandrolone Decanoate powder kungathinta izinga le-steroid yakho.
Eqinisweni, nge-apparatus kanye nezithako ezifanele, ungakwazi ukuhamba kahle nge-Nandrolone Decanoate futhi uqaphele amandla akho okuvuselela umzimba.
I-Nandrolone Decanoate, i-GJ Blokdijk, i-CreateSpace Independent Publishing Platform, i-2018, ikhasi 1-170
I-Anabolic Steroids ne-Athlete- 2d ed, uWilliam N. Taylor. MD, ikhasi le-39
Izidakamizwa, abadlali, kanye nokusebenza komzimba, okuhlelwe nguJohn A. Thomas, ikhasi 27-30
Ama-Nootropics ama-7 amahle (ama-Smart Drugs) emakethe ye-Bromantane
Indlela Yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe Yokuxuba I-Trenbolone Inanthate Powder 2019 I-10 edumile kakhulu ye-Anabolic Steroids Raws Material